रोल्पालिको प्रश्न: नेता गाडीमा, जनता खाडीमा «
रोल्पालिको प्रश्न: नेता गाडीमा, जनता खाडीमा
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०७५, शनिबार ११:०१
काठामाण्डौ- रोल्पा भन्ने बितिकै राता मान्छेको गाउ, कुनै बेला पञ्चायतविरुद्ध नडगमगाई उभिने किल्ला, माओवादी जनयुद्धको उद्गमथलो । माओवादी जनयुद्धको आधार इलाका । माओवादी जनयुद्धमा बलिदानीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको जिल्ला । यस्ता धेरै बिम्ब रोल्पाका लागि कुनै बेला अपुग थिए । बास्तवमा भन्दा रोल्पाले नै माओबादी बलियो यो जित घडिसम्म ल्याएको ठाउ हो ।
त्यहाँको जनताले सात दिए, भात दिए अनि ज्यान दिए । त्यही माटोबाट कसम खाएर हिडेको नेताहरु आज माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै धेरै बिम्बहरु परिवर्तित भए । लाल किल्लाको नेतृत्व गर्ने राता मान्छेहरु वैचारिक रुपमा रङ् खुइलिएका थोत्रा खेलौनाजस्ता भए तर उनीहरुको गाला, अनुहार र शरीर भने रातो, चिल्लो र खान्दानी बन्दै गयो । कुरा क्रान्ति र विद्रोहका गर्दै रोल्पाका नेताहरु आफ्नै स्वार्थको खेतिपातीमा लागे । कतिपय अहिले फेरि क्रान्तिको नाममा रोल्पामा अर्को खेती लगाउने मनसुवा बोकेर बसेका छन् । तर रोल्पाली जनताको जीवनमा यी सबैले तात्विक परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । आजकल कतिपयले यसो भन्ने गरेका छन् ।
रोल्पाबाट केहि नेता हरु उच्च तहमा पुगे । रोल्पाबाट धेरै पटक केही व्यक्तिले सरकारको उच्च ओहोदामा रहने अवसर पाएका छन् । प्रायः कृष्णबहादुर महरा, नन्दकिशोर पुन, वर्षमान पुन, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती र ओनसरि घर्तीले पटक पटक महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु पाए । उपराष्ट्रपति, केही मन्त्री, सभामुखजस्ता पद त रोल्पालीहरुका लागि मात्रै भनेर सिर्जना गरिएकोजस्तो भएको टिप्पणी सुनिन्छ । नेताहरुले हिजो सुन्दर भविष्यको सपना बाँडेर रोल्पालीलाई जनयुद्धमा होमिन प्रेरित गरे । त्योसम्म ठीकै मान्न सकिएला । शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरुको जीवनस्तर उकासियो तर सामान्य रोल्पाली जहाँको त्यहीं छन् ।
नेताहरुले हिजो बाडेको सपना र रोल्पाका मानिसहरुलाई आधारभुत जिबिका पार्जन गर्नको लाई बिकास पुर्याएत ?
कयौंले बलिदान गरे, कयौं अङ्गभङ्ग छन्, कयौंको परिवार क्षतविक्षत छ । उनीहरुको दैनन्दिनी र समस्या झनै विकराल छ । प्रश्न उठाउन खोजिएको चाहिं यो हो कि केही रोल्पाली नेता–नेतृहरुको जीवनस्तर उकास्नुबाहेक बलिदानीले आम रोल्पालीको जीवनमा के नै परिवर्तन ल्यायो ? के रोल्पालीले केही नेतालाई लाभको पदमा पु¥याउनका लागि मात्रै बलिदान गरेका थिए ? मन्त्री वर्षमानको परिवारबाट मात्रै तीन जनाले लाभको पद लिए । के रोल्पालीको बलिदानी यत्तिकै लागि मात्र भएको थियो त ? रोल्पालीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् । नेताहरुले हिजो बाडेको सपना र रोल्पाका मानिसहरुलाई आधारभुत जिबिका पार्जन गर्नको लाई बिकास पुर्याएत ?
जनयुद्दमा उल्लेख निय योगदान भए पनि नेताले सुखसयलपूर्ण जिन्दगी बिताइरहेको यो अवस्थामा रोल्पाली जनताको वास्तविक दैनिकी कस्तो छ त ? यसबारेमा पूर्व माओबादी अहिले विगत लामो समय देखि युएईमा मजदुरी गर्दै आइरहेका राम बहादुर बुढा भन्छन्, ‘हाम्रो बलिदानीमाथि खेलवाड गर्दै नेता गाडीमा चढेका छन्, हामीजस्ता हजारौं जीविकोपार्जनका लागि खाडी आउन बाध्य छौं ।’ भन्ने कुरा गर्दछन ।